Ngokushesha noma kamuva, abashayeli babhekene nesidingo sokususa izibani zezimoto - lokhu kungokwemvelo. Imoto ngayinye isebenzisa izinhlobo eziningana zezibani. Namuhla, ama-automaker amaningi futhi afaka ama-optics ama-H11 ama-amp. Ziyini lezi zakhi, yiziphi izici abanayo, yiziphi izinhlobo zezibani ezikhona? Konke okukhathazayo abanikazi bemoto. Ake sizame ukuphendula le mibuzo.
Lezi zibani zinikeza ukukhanya okukhanyayo nokuqine kakhulu. Zisetshenziswa kakhulu ezinhlokweni zekhanda ezinomshini njengezibani zokugcoba, kanye nanoma yiziphi izinsimbi zomculo. Leli yilabhu enokulinganisela kakhulu kunazo zonke ezitholakalayo namuhla, ngaphezu kwalokho, lolu hlobo lwesondlo lubhekwa njengenye yezinto ezivame kakhulu. Kukhona ama-halogen ama-H11 ne-LED. Ukuziqhenya kwalesi sondlo ukuthi kunikeza amandla aphezulu esibani - okungenani u-55 W, ngenkathi izinyawo zezinye izinhlobo, isibonelo - H8, zingekho ngaphezu kuka-35 W wamandla. Ngesikhathi esifanayo, ama- H11 ukukhanya akuhlukile kakhulu kwezinye. Umehluko lukhona kuphela ezinhlotsheni zamagundane asetshenzisiwe. Ukwandisa ngokusebenzisa i-cap yaloluhlobo, amandla avumela ukuthola ikona elikhulu lokukhanya - isikhala senziwa kuze kufike ku-30-40 m. Ngenxa yokuklanywa okukhethekile kwezibukisi, umgwaqo ukhanya kangcono.
Izakhi ze-halogen ze-optical zingenye yezinhlobo zezibani ngaphakathi lapho isikhala sonke sigcwele igesi ekhethekile. Lezi zingaba yi-halogen bromine noma i-iodine. Ibhulethi lelibhu livame ukwenziwa ngilazi ye-quartz - le ngilazi igxilile kakhulu, imelana namazinga aphezulu okushisa kanye nomthelela wamakhemikhali ahlukene. Ngenxa yokuklama okhethekile, ama-halogen angu-H11 anezici eziphezulu zobuchwepheshe futhi ahlukaniswa ukukhanya okulula okukhanya. Phakathi kwezinzuzo zama-halogen ama-bulk isisindo esiphakeme sokukhishwa okukhanyayo. Lezi zibani zikhanyisa kahle emgwaqweni, futhi ama-bulb ekhanyayo aphuzi, okubonakala kahle kakhulu emehlweni abantu. Inzuzo yesibili enkulu ngosayizi ohlangene. Izakhi ezinjalo zingasetshenziswa kumadivayisi amancane, njengezibani ezengeziwe. Ngokuvamile i-base H11 ingatholakala ku-optics yomoya. Futhi, abaningi banquma ukutholakala okuphezulu kwalezi zakhi zokukhanyisa - ezimakethe zanamuhla ungathola inombolo enkulu yezibonisi zezibani ezivela kubakhiqizi abahlukene. Inzuzo ebalulekile yintengo. I-optics ye-halogen izobiza kakhulu ngaphansi kwezixazululo ze-xenon noma ze-LED.
Ukubuka ngokugcwele nokuhlolwa kwama-H11 izibani
Izazi zenze ukuhlolwa okuzimele kwemikhiqizo ethandwa kakhulu. Izibani ezivivinyelwe imoto ngezimo ezahlukene. Ukulinganisa kubandakanya kuphela abameleli abahamba phambili nabasebenza kakhulu. Ngakho-ke, ngesikhathi sokuhlolwa, izinga lokukhanyisa emabangeni ahlukahlukene lalinganiselwa, futhi ukukhanya kweminye imigwaqo ibuye kubhalwe. I-flux ekhanyayo yayibukelwe ekuphakameni kwe-1 m ukusuka ebusweni bomgwaqo.
I-Osram Night Breacker Unlimited
Lokhu kungomunye wabameleli abaqhakazile emakethe yezinsimbi zomculo. Lezi zibani ezikhanyayo zihlanganisa i-radiator, i-stabilizer yamanje neyomshini, ama-lens nama-LED wokukhanya okukhulu. Ukuze uzizwe ukusebenza okuphezulu komkhiqizo, kuyadingeka ukuba usebenzise kuwo. V. Lelibhu likwazi ukuletha ama-watts angu-55, kuyilapho izinga lokushisa elikhanyayo lingu-4000 K. Ukususa ukushisa okwedlulele, i-radiator alloy radiator isetshenziswa. Ukukhanya okukhanyiswa kwalesi sibani kungabanda noma kufudumele (kumhlophe). Ukwakhiwa kwe-halogen kulungiselelwe ukukhipha noma yikuphi ukwehla ekukhanyeni kwe-ampu. Isibani sinezihlungi ezivela ku-ultraviolet - lokhu kuzoqeda ngokuphelele i-turbidity ye-plastiki. Uma uqhathanisa lezi zibani ngemoto ngokujwayelekile (incandescent), khona-ke umkhiqizo ovela ku-Osram usebenza kakhulu - abathengi bathola kabili ukukhanya kunanoma yiluphi olunye isibani. Ngenxa yokuhlolwa, ubude be-cone yokukhanya buyi-35 m. Indawo ekhanyayo iqondana ngqo nemoto, futhi indawo yokukhanya ikhanya kakhulu futhi ibanzi. Ebhekene nezimpendulo zabanikazi bemoto, emvula isibani asibaniki noma yini futhi sikhanyisa kahle imigodi nemigwaqo. Ngenxa yokukhishwa kwekhwalithi yekhwalithi, izingxenye zepulasitiki azizincibiliki.
I-Koito Whitebeam H11
Lawa angama-halogen ama-bulb ezinkanyeni ezivela enkampanini yaseJapane. Izici zabo zobuchwep nazo ziphakeme kakhulu - la madivaysi angabhekwa ngokuphepha kubaholi bemakethe. Izinto zenzelwe i-V V voltage voltage futhi zikwazi ukuletha ama-watts angu-55, okulingana nama-watts angu-100 wesibani esivamile saso. Umkhiqizi uthi ukushisa kwe-luminescence ngu-4000 K, futhi ukukhanya ngokwayo kunomphumela we-xenon. Ukukhanya kuseduze nosuku ngaphandle kokuphuza. Uma ufunda ngokuningiliziwe ukuklama kwalo mkhiqizo, umkhiqizi usebenzisa ama-plinths alungile okwenziwa ngaphansi kwe-Philips brand for the assembly of ama.
Njengoba imiphumela yezivivinyo zibonisa, azikho izinkinga ngezibani ngokukhanyisa indawo. Kodwa ukushisa kokukhanya akuhambisani nalokho okushiwo yiJapane ngokucaciswa kobuchwepheshe. Labo abathenge lesi sibonelo sokuthi sibanika ukukhanya okuqinile kombala ophuzi okhanyayo, futhi noma yimuphi umphumela we-xenon awukho ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi sokusebenza, kwakukhona ukumelana okubuthakathaka ekudumeni nasekuthungeni - ibhotela elitshiyelwe lalihlale lihlelekile uma lihamba emgwaqweni. Kodwa ngaphandle kokushiyeka, kunezinzuzo kulo mkhiqizo waseJapane. Umthunzi ophuzi kahle ukhanyisa yonke into eseduze nemoto, esimweni semvula. Ukushisa kombala okhethekile kwenza uKoito abe yisinqumo esihle njengethuluzi lokubhema. Umgwaqo ukhanyiswe ngo-10-15 m.
I-MTF Light Palladium
Lena enye i-halogen ibhuloho H11 (12V, 55W). Ikhiqizwa eNingizimu Korea. Ngezici zobuchwepheshe, lo mkhiqizo awukho ngaphansi kwezinguqulo ezidlule. Umkhiqizo unomshini wokushisa wensimbi - lokhu ngeke kuvumele izingxenye zeplastiki ziphule. Ngaphezu kwalokho, i-llama ibhulaki ine-revenge ekhethekile, evikela emisebeni ye-ultraviolet. Isici esibalulekile salezi zinto ezibonakalayo kukhona ukugqoka okuphambene nokuphazamiseka kokubili. Ngakho umkhiqizi waphumelela ukwandisa kakhulu umthamo we-flask (ngo-15%) futhi unciphise ukukhiqiza ukushisa. Lo mkhiqizo uhlangabezane nazo zonke izivivinyo - umhlaba ukhanyiswa kahle ebangeni elingamamitha ayi-100. Kuze kufike ku-50m indawo yokukhanya ikhanya kakhulu, imigwaqo ye-roadsides ikhanya kahle. Umbala ubumhlophe, ngaphandle kwe-shades noma eluhlaza okwesibhakabhaka. Umkhiqizo unikeza ukukhanya okumhlophe ngokuqondile. Ihambelana ngokuphelele njengegoli elidlula.
Le mikhiqizo ikhiqizwa kaningi ngabakhiqizi abangamaShayina abangaziwa, abathembisa ukukhanya okukhanyayo kumthengi, amandla okungenani izibani ze-halogen kanye nezinga le-luminescence elifaniswa ne-xenon. Eqinisweni, lokhu akulona iqiniso. Amacala angu-95% - lokhu kungukukhwabanisa. Kodwa kunezinketho zekhwalithi. Abakhiqizi banamuhla banikeza ama-LED ama-high amandla angu-H11 ngekhanda kanye ne-optics eyengeziwe. Amanye amamodeli anezici eziphakeme kakhulu kunezo ze-xenon. Ngokuqondene nomsila, uthola abanikazi bezimoto ezihlukahlukene.
Izici zezinto ezise LED
I-halogen evamile i-H11 55w ikwazi ukunikeza ukukhanya okulula kwe-1350 lm. Zisetshenziswa njengezibani ezifakwe ezithambile kanye nezibani zombhobho. Izakhi ze-LED ezikhanyayo nazo zihlukaniswe zibe izinhlobo ezimbili. Amamodeli ahlukumezekile ngezibani zombhobho abuthakathaka kunezingu-700 lm nangamandla amakhulu okugcoba angaphezu kuka-1350 lm. Ngezinga lokusetshenziswa kwamandla, izixazululo ze-LED cishe zihambisana ngokuphelele ne-halogen. Lokhu kwenza ukuthi kungenzeka ukuthi ungasebenzisi "bluffs" ukuze amakhompiyutha asebhodi angabika amaphutha. Kulezi zibane, ukukhanya kokukhanya kanye nomugqa owenziwe kahle kunikezwa ngamadidi amane. Zitholakala ezimbili ezinhlangothini ngalunye. Lawa madidi ayingayizi encane futhi ahlelwe ngendlela yokufanisa ama-filaments kuma-halogen onobuhle. Isimiso sokuhlakazeka kokukhanya ku-reflector kuzoba okufanayo. Uma uzama ukuqhathanisa izibani ze-LED nge-xenon, ngenxa yalokho zihambisana nezinga eliphakeme lokukhanya kwe-xenon optics.
Lezi zici ezibonakalayo ezinekhanda le-H11 zinemiqondo eminingi enhle ehlanganisa ukungalungi okuncane. Ibiza kakhulu kunawo wonke - ibhuloho H11. Intengo ingama-dollar angu-20-50 - futhi lokhu kungukubuyiswa kwayo kuphela. Kodwa ama-LED asuvele efakazele bona njengenye yezindlela zokukhethwa kwemoto, okuvumela ukuthi kungabonakali kuphela ukukhanya okukhanyayo, kodwa futhi ukuguqula umthunzi wokukhanya kwawo. Phakathi kwezinzuzo kukhona inombolo enkulu yezixazululo zombala ezikuvumela ukuba ukhethe okukhethwa kukho okuhle kakhulu. Ukuze usebenze lezi zibani, kuncane amandla adingekayo, okungcono ibhethri. Ngenxa yalezi zibani, kungenzeka ukunciphisa ukusetshenziswa kwephethiloli. Lezi zithombe, ngokungafani ne-halogen, zibekezelele kangcono ukudlidliza nokuthuthumela, ukuqhutshwa kwamagesi kwi-inboard board, izinguquko zokushisa. Le mikhiqizo ingavulwa futhi ivaliwe, kepha ungesabi ukwehluleka kwabo. I-base H11 kule nguqulo ye-LED ishisa emazingeni okushisa aphansi, futhi ingilazi yesikhanyiso nayo ayifudumele - ingozi yokukhishwa kwesimo ayifakiwe ngokuphelele. Ukuphila komsebenzi wesibani esinjalo iminyaka eyisikhombisa noma ngaphezulu. Nakuba ngokuvamile lezi zinhlayiya zisebenza ngaphezulu kwezinhlanu. Noma kunjalo, ngisho nenkathi enjalo isikhathi eside kunesikhathi sokusebenzisa isibani sase-halogen. Ama-LED anesithakazelo esihle futhi anikeze ukukhanya okukhululekile. Phakathi kwabakhiqizi kukhona izinkampani ezinzulu ezinokuhlangenwe nakho okukhulu okunikeza imikhiqizo yekhwalithi.
Izinhlobo nezinhlobo zezibani ze-LED H11
Njengokwimeko ye-halogen light, i-H11 model diode inikezwa ngezinhlobo eziningana. Ngokuvamile izindlela eziyinhloko yizinombolo zama-LED, injongo kanye ne-lens. Ukuhlukahluka ngalunye kubonakala ngezici zayo zobuchwepheshe - amandla, ukukhanya okukhanyayo kanye neminye imingcele ebalulekile.
Lapha umkhiqizi unikeza ama-LED ayishumi nane. Lokhu kukuvumela ukuba unike izinga lokukhanya elifinyelela ku-1200 lm ngamandla angaphezu kwamathani angu-15. Lokhu kungenye yezimpawu ezikhanyayo ze-LED. Umkhiqizi uyibheka njengokukhanya kokushayela. Ukukhanya kuhlanzekile futhi kuhlanzekile. Lesi sinkinga singakwazi ukufaka ukukhanya kwe-xenon.
H11 12Epistar HP + 4 Cree
Lapha, ngaphezu kwamadidi, kukhona i-lens ekhethekile.
Ngokuqondene nenombolo yamadidi, kukhona ayishumi nesithupha. Lolu khetho lubhekwa njengenye yezindleko ezibiza kakhulu, kodwa ngokwezimfanelo zobuchwepheshe - lokhu ukuthenga okulungile. Lelizinga lokukhanya ngeke lisakhipha ibhuloho elilodwa. Ukukhanya kungu-2520 lm. Amandla ayi-watts angu-80.
Imakethe yanamuhla inikeza ukukhethwa okukhulu kwezibani zomoto ngesisekelo sanamuhla nesinemisebenzi eminingi yezintandokazi, izinhlobo ezahlukene nezici. I-cap H11 iphelele izibani ezengeziwe kanye nokukhanya okuyinhloko. Okukhethwa kukho kuhlanganisa izibani ze-LED ne-halogen ezinezici eziphezulu. Sihlolisise ubuhle nokuqeda kwemikhiqizo yombili. Yikuphi okumele ukhethe kufinyelele kuwe.
Ukuvuza okwamanje emotweni: kanjani ukuhlola umhloli, i-bulb, i-multimeter?
Coloproctologist - ngubani? Coloproctologist futhi Proctologist: uyini umehluko?